कलैया उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ३ बारामा सानो प्रयासले न्यानो उपहार – CIN Nepal Online Radio Network
कलैया उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ३ बारामा सानो प्रयासले न्यानो उपहार
अनिल पान्डे, कलैया, बारा ।
कलैया उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ३ बारामा
सानो प्रयासले न्यानो उपहार प्रदान गरिएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ले आज चिसो लाई लक्षित गरि आज कलैया उपमहानगरपालिका वडा न ३ मा कम्बल बितरण गरेको छ । कलैया उपमहानगरपालिका वडा न ३ मा रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी को वडा कमिटी ले आयोजना गरेको एक कार्यक्रमका बीच बितरण गरेको थियो ।
तराई तथा मधेशमा अहिलेचिसो बढ्दै गएपछि गरिब परिवारलाई टेवा पुग्ने भएकोले कम्बल वितरण गरिएको नेकपा बाराका सदस्य मुकेश साहले जानकारी दिए ।
अहिले कलैयासहित तराई मधेशमा चिसो बढेको छ’ साहले भने, ‘गरिब परिवारलाई केही राहत पुगोस् भन्ने उद्देश्यले नेकपाले कम्बल वितरण गरिएको छ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बारा का इन्चार्ज तथा केन्द्रिय सदस्य क. बलबिर चौधरी को प्रमुख आतिथ्य मा कलैया उपमहानगरपालिका वडा ३ मा करिब ५० थान कम्बल बितरण गरेको थियो । कार्यक्रम को बिशिस्ट अतिथि को रुपमा बारा का सह इन्चार्ज माननीय क. ज्वाला कुमारी साह को रहेको थियो भने अतिथीमा क. अमृत शर्मा बजगाइ, रबिन श्रेष्ठ, धुरी साह, मुकेश साह, जवाहिर अंसारी, उमेश यादव, भदै राम, पुरुषोतम साह, साथै अन्य नेताहरुको उपस्थिति रहेको थियो । कार्यक्रम को संचालन रमेश साह ले गरेका थिए ।